ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များ Install လုပ်နည်း - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များ Install လုပ်နည်း
ယင်းကို install သောအခါအသင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများကြုံတွေ့ဖူးခြံစည်းရိုး pannel ဘုတ်အဖွဲ့? Next ကိုအကြှနျုပျတို့သညျထိုခြံစည်းရိုးဘုတ်အဖွဲ့ကို install တချို့အကြံပေးချက်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဗီနိုင်း pannel ကို install ၏စီစဉျ
•မြေအောက်လိုင်းများနေရာချထားခြင်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်ရန်သင့် utility ကိုထောက်ပံ့ဆက်သွယ်ပါ။
•သင့်ခြံစည်းရိုး၏အဆင်အပြင်ကိုထုတ် Sketch နှင့်သင့်စီမံကိနျးအတှကျလိုအပျသညျ့ပြား, တံခါး, ရေးသားချက်များနှင့်ထုပ်၏နံပါတ်တွက်ချက်။
•တတ်နိုင်သမျှအများအပြားအပြည့်အဝပြားထားရှိရန် layout ကို Adjust ။ သင်တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း panel ကိုအသုံးပြုရမည်ဆိုပါက, ပိုရောက်အတွက်ထားပါ။
တူး POST Hole
•ထောင့်မှာလှည့်အဆုံးသတ်အဆုံးကနေ String ကိုသင့်ရဲ့လိုင်း။ ဤသည်ခြံစည်းရိုးတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းကို enable ပါလိမ့်မယ်။
•ဒါကြောင့်တစ်ကြိမ်အပေါက်တူးဖို့အကြံပြုသည်။ အချင်း 36 မှာ "12" တူး post ကိုတွင်း 10 (ဆောင်းရာသီတွင်ဒေသခံထုံးစံသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်နှင်းခဲနက်ရှိုင်းပေါ် မူတည်. ) နက်ရှိုင်းသော "42 မှ" ။ အဆိုပါအပေါက်တန်းပေါ် မူတည်. ပို့စ်အဖြစ်နက်ရှိုင်းဖြစ်သင့်သည်။ 8 "x ကို 8" ရေးသားချက်များဘို့က x5"ရေးသားချက်များနှင့် 32" "5 တန်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော" အသက် 30 ထက်လျော့နည်းမရှိပါ။ တွင်း၏အချင်း 8 "x ကို 8" ရေးသားချက်များဘို့က x5"5" 12 ထက်လျော့နည်း "ရေးသားချက်များနှင့် 15" မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပရီမီယံစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ကွန်ကရစ်ရောနှောထိုဒေသတွင်မြေပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်. အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
•သင် install လုပ်ပါလိမ့်မယ်စတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးစင်တာတိုင်းတာပေါ်အာကာသ post ကိုတွင်း (သင့်လျော်သောစတိုင် spec စာရွက်ကိုကြည့်ပါ) ။ အားလုံး post ကိုတွင်းလိုင်း၌ရှိကြ၏သေချာနှင့်တွင်းအကြားအကွာအတည်ပြုရန်တစ်ဦး string ကိုလိုင်းသုံးပါ။
setting & စာတိုက်နှင့် panel Installing
•ကွန်ကရစ်အစုံရှေ့တော်၌ထို post ကိုစ Pre-notched, Pre-စုဝေးအပိုင်း panel ကိုအတွက် Snap (ပုံ3& 4) ။
သငျသညျအတူတူတင်းကျပ်စွာရန်သင့်ပြား install လုပ်မရသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဗီနိုင်းရွှေ့ဖို့အခန်းတစ်ခန်းလိုအပ်နေပါသည်။ ဗီနိုင်းများကြောင့်ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးမှချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ အတူတူသိပ်တင်းကျပ်စွာပြား Installing, ထိုဖဲကြိုးကိုအကျိုးသက်ရောက်ပေးခြင်းသည်သင်၏ခြံစည်းရိုးများဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောအဆိုပါဗီနိုင်းကန့်သတ်ခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်ကပြားအတွက် dips နှင့်ကွေးကြည့်ရှုရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကအိမ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးထက်ပိုအမြန်ထုံးစံ၌၎င်းတို့၏ပြားကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ သို့သော်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုတစျခုထက်သင့်ပြားကို install, အပြားအလှည့်တစ်ဦးစွန့်ပစ်၏သင့် hard အလုပ်မျိုးကိုအရာ, မညီမညာဖြစ်နေသောဖြစ်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ သငျသညျတစ်ကြိမ်သည်သင်၏ပြားကိုထည့်သွင်းထားသကဲ့သို့သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးချင်းစီ panel ကိုဖြောင့်ကို install သေချာစေရန်, သင့်အဆင့်အထိတစ်ဦးချင်းစီအချိန်သုံးပြီးမကြာခဏသင်၏အလုပ်ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုပေမည်။ သငျသညျထိုသူအပေါင်းတို့ကို install အပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြသည့်အခါပြားအလွန်လွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ကြသည်။ သေချာသူတို့သည်သင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးအဆင့်များမှာပြုလုပ်ခြင်းသင်တို့အဘို့အမှုအရာတစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းကွန်ကရစ်တက် setting သောအခါသင်ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းအဖြစ်ကြပြီးနောက်သူတို့အဆငျ့နေဖို့ကြောင်းသေချာစေရန်ချင်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များတပ်ဆင် ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက် ခြံစည်းရိုး Panel များတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်